Salaamanews » Muqdisho oo bilowday olole nadaafadeed oo lagu bixinayo abaal-marin lacageed
Home » Warar Muqdisho oo bilowday olole nadaafadeed oo lagu bixinayo abaal-marin lacageed Print - Daabace: SalaamaNews - Feb 1st, 2013 // Ka Jawaab	Qoraallo La Xiriira
Qarax miino oo ka dhacay magaalada BeledweyneMadaxweyne Maxamuud oo buuxiyay booskii uu iska casilay Agaasime FiqiMaamulka Somaliland oo fududaynaya sharciyada ganacsigaWasaaradda maaliyadda oo la xisaabtan ku billowday dekedda MuqdishoSacuudiga oo xeendaab ku xiraya xadkiisa wadanka Yemen
Dad is-xil-qaamayaal ah oo nadaafad ka wada magaalada intii lagu jiray olole nadaafadeed kahor inta aysan dhicin doorashadii madaxweynanimada. [Maajid Axmed/Sabahi]“Waxaan ku bixin doonnaa abaal-marin degmooyinkii kaalimaha hore ka gala tartanka nadaafadda Muqdisho,” ayuu yiri Ra’iisul-wasaare Cabdi Faarax Shirdoon 21-kii January. “Degmada guulaysata waxa ay heli doontaa $15,000 oo doollar, tan labaad $10,00, halka tan seddexaadna ay heli doonto $5,000.”
Dad is-xil-qaamayaal ah oo nadiifinaya Wadada Wadnaha ee Degmada Warta Nabadda 31-kii January. [Cali Aadam/Sabahi]“Waan ku hanweynnahay in degmada Warta Nabadda ay noqon doonto tan kaalinta koowaad ka gasha tartanka ololaha usbuuca nadaafadda ee Muqdisho,” ayay tiri. “Si adag ayaannu u shaqeyn doonnaa si aan u guulaysanno.”
“Waxaan aaminsanahay in dhibaatada ugu weyn ee ina haysata ay tahay nadaafadda xumida ka jirta waddanka oo dhan,” ayuu yiri. “Waxaan ka rajaynaynaa maamulka cusubi in uu la tacaalo dhibaatadaa.”
Tags: warar « Qoraalkii HoreTaariikhda Dhulka iyo Dadka Soomaaliyeed – (Documentation-Film) Daawo Video	Qoraalka Xiga »Soomaaliya iyo midowga Yurub oo baaq mideysan u diray beesha caalamka	Halkan Hoose ku Jawaab